Maraqa madow ee truffle aperitif - VIP truffles
Aad ayey u fududahay in la diyaariyo suugada madow ee loo yaqaan 'truffle austiifif' - Soo ogow cuntooyinkayaga dhadhan fiican leh ee loo yaqaan 'truffle truffle'. Sanduuqa aperitif-ka ayaa ku habboon inuu raaco cuntadan.
Waqtiga diyaarinta: daqiiqadaha 5
Waqtiga Joogitaanka: 2 saacadood qaboojiyaha
Waxyaabaha ay ka kooban tahay dadka 6
100 garaam oo jiis aqal leh 40% dufan
100 garaam oo kareem culus
2.5 centilitres oo saliid saytuun ah oo leh qashin madow
5 garaam oo xamuul madow ah oo la jarjaray
Fleur de sel oo leh madow madow
Isku qas mashiinka ka baxa iyo kareemka culus.
Ku dar turub-madow iyo saliidda shuunka.
Cusbo ubax ubax madow iyo basbaas.
Qaboojiyaha 2 saac ka hor intaadan u adeegin.
Maraqa madow ee loo yaqaan 'truffleffle aperitif' - Sanduuqa aperitif ayaa ku habboon inuu la socdo qormadan. Si aad u raacdo aperitif, soo ogow VIP truffle aperitif sanduuqa :
madow subagga trufflesubagga trufflesanduuqa aperitifsanduuqa hadiyaddafikradaha hadiyaddaBaaskiilsuugo appetizertaraafikadaxamuul madowmadow Périgord truffles
"Tapenade oo leh saliid dhalo madow
Tooraydo wata madow madow "